Language: Myanmar | English
မင်္ဂလာပါ iServe မှကြိုဆိုပါတယ်
Wai Yan Electronics ဆိုင်များမှဝယ်ယူထားသည့် iPhone နှင့် iPad များ ပြုပြင်ခြင်းအတွက် iServe မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။
Apple ၏ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများမှ hardware နှင့်
software ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများအား အပြည့်အ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးလျှက်ရှိပါသည်။
Apple မှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းသော Original Parts များအားအသုံးပြုကာ Apple ၏ တိုက်ရိုက် လမ်းညွန်မှုများဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ iDeviceများကို မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကဲ့သို့ တန်ဖိုးထားကိုင်တွယ် ပြုပြင်ပေးခြင်းကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်မှု ရရှိစေပါသည်။
လူကြီးမင်း ၏ iDevice များကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုလိုပါကလည်း Apple မှ
တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု Trainer များဖြင့် Customer Workshop များ စီစဉ်ပေးပါသည်။
Wai Yan Electronics ဆိုင်များမှဝယ်ယူထားသည့် iPhone နှင့် iPad များ ပြုပြင်ခြင်းအတွက် iServe မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ Apple ၏ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများမှ hardware နှင့် software ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများအား အပြည့်အ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးလျှက်ရှိပါသည်။ Apple မှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းသော Original Parts များအားအသုံးပြုကာ Apple ၏ တိုက်ရိုက် လမ်းညွန်မှုများဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ iDeviceများကို မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကဲ့သို့ တန်ဖိုးထားကိုင်တွယ် ပြုပြင်ပေးခြင်းကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်မှု ရရှိစေပါသည်။ လူကြီးမင်း ၏ iDevice များကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုလိုပါကလည်း Apple မှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု Trainer များဖြင့် Customer Workshop များ စီစဉ်ပေးပါသည်။
iServe အကြောင်း လေ့လာရန်
iServe ၏ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ နှင့် ရောင်းချမှု လုပ်ငန်းများ အားလုံးကို 28th Feb, 2019 မှ စတင်ပြီး ရပ်နားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။ iServe ၏ ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ၀ယ်ယူအားပေးခဲ့ကြသော ဈေးဝယ်သူ မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိပါသည်။
iServe ဆားဗစ်စင်တာ ကို ၂၀၁၅ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် Apple ၏ တရားဝင် ဆားဗစ်စင်တာ အဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ Apple မှ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာများမှ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး တုို့ တွင် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ iServe မှ လူကြီးမင်းတုို့ အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ဆောင်မှု နှင့်အတူ စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေမည်ဟုအာမခံပါသည်
လူကြီးမင်းတို့၏စက်ကိုယူဆောင်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် iServe မှ Apple ၏ ချမှတ်ထားသည့်စည်ကမ်းအတွင်း အသေးစိတ်စစ်ဆေးပေးပါမည်။ ကင်မရာ ၊ တုန်ခါသည့်မော်တာ ၊ စင်းကဒ်ထည့်သည့်ပစ္စည်း ၊ စပီကာ ၊ စင်းကဒ်ထွက်သည့်လက်တံ အစိတ်အပိုင်းများမှ လဲလှယ်ရန်လိုပါက iServe မှ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ မျက်နှာပြင်မှန် ၊ အဓိကဆားကဒ်ပြား ၊ Home button အပိုင်းမှ ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါက Apple သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးအလုံးသစ် လဲလှယ်သည့် ၀န်ဆောင်မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
အလုံး သစ်လဲလှယ်ပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှုအတွက် အာမခံအကျုံးမ၀င်ပါက ကုန်ကျစရိတ်ကုိုအသိပေးအကြောင်းကြားပါမည်။ အရည်တမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးခြင်း၊ မတော်တဆခိုက်မိခြင်း၊ Apple တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု မဟုတ်သော ပြင်ပဆိုင်များတွင် ပြင်ဆင် တပ်ဆင်ထား သောစက်များအတွက်အာမခံအကျုံးမ၀င်ပါ။
iServe မှ iPhone 5s မှစတင်ပြီး အသစ်ထွက်ရှိလာသည့် models များ၏ hardware ပိုင်းနှင့် Software ပိုင်း များကိုဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ အခြား iPhone များအတွက် software ပိုင်း ၀န်ဆောင်မှုကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
iServe တွင် အပ်နှံထားပြီး ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သောစက်များအတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ စက်အတွင်းမှအချက်အလက်များကိုကိုယ်တိုင်သိမ်းဆည်း လာခဲ့ပါရန် နှင့် Find my iPhone ကိုပိတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ပစ္စည်း ပြုပြင်မှုအတွက် အပ်နှံသည့် ရက်မှ ခန့်မှန်း ၅ ရက် သို့မဟုတ် ၇ ရက် ခန့် ပြုပြင်ချိန်ကြာမြင့်ပါမည်။
တနင်္လာနေ့ မှ စနေနေ့ ထိမနက် ၁၀နာရီ မှ ညနေ ၅ နာရိ
လူကြီးမင်းတို့၏စက်ကိုယူဆောင်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် iServe မှ Apple ၏ ချမှတ်ထားသည့်စည်ကမ်းအတွင်း အသေးစိတ်စစ်ဆေးပေးပါမည်။
iPadပြင်ဆင်မှုအတွက် အာမခံအကျုံးဝင်ပါက အလုံးသစ်လဲလှယ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အရည်တမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးခြင်း၊ မတော်တဆခိုက်မိခြင်း၊ Apple တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုမဟုတ်သောပြင်ပဆိုင်များတွင်ပြင် ဆင်တပ်ဆင်ထားသော စက်များအတွက် အာမခံအကျုံးမ၀င်ပါ။
iServe မှ iPad Air2 နှင့် iPad mini3တို့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။အခြား iPad များအတွက် software ပိုင်း ၀န်ဆောင်မှုကို လည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
iServe တွင် အပ်နှံထားပြီး ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သောစက်များအတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ စက်အတွင်းမှအချက်အလက်များကိုကိုယ်တိုင်သိမ်းဆည်း လာခဲ့ပါရန် နှင့် Find my iPad ကိုပိတ်ပေးထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ပစ္စည်း ပြုပြင်မှုအတွက် အပ်နှံသည့် ရက်မှ ခန့်မှန်း၅ရက် မှ ၇ ရက် ခန့်ပြုပြင်ချိန် ကြာမြင့်ပါမည်။
တနင်္လာနေ့ မှ စနေနေ့ ထိမနက် ၁၀နာရီ မှ ညနေ ၅ နာရီ
iServe ၏ ၀န်ဆောင်မှုရယူသော လူကြီးမင်း၏ စက်အတွက် ပြုပြင်တိုးတက်မှု အခြေအနေကို သိနိုင်ရန်
အောက်ပါ လင့်ခ်အတွင်း Tracking number ( SRO number ) ထည့်သွင်းကာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Service document ပေါ်ရှိ ဘားကုတ် အား မိမိဖုန်းဖြင့် scan ဖတ်၍လည်း လင့်ခ်အတွင်း ၀င်ရောက်နိုင် ပါသည်။
ထပ်မံသိရှိလိုသောအချက်များရှိပါက Message box မှတဆင့်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Open tracking app
Apple Authorized Service Provider Kabaraye
90 (A/B) Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar
Hot Line Phone No: 95-9-2614-30001
View our shop location on apple website.
Apple Authorized Service Provider Mandalay
No. 352, Corner of 30th St. & 82nd St., East Aung Nan Yeik Thar, Chan Aye Thar Zan Townshi, Mandalay, Myanmar.
Hot Line Phone No: 95-9-2614-30003
Copyright © 2015 iServe
Developed by Future ICT Soluton